Iqela labasebenzi abagqwesileyo linikezelwe kumgangatho ophezulu wezixhobo zokutshintshisa ubushushu kunye namava eminyaka kwi-R & D nakwimveliso. Iqela libandakanya iinjineli eziphezulu ezi-6, iinjineli ezili-17, iinjineli ezingama-24, kunye neengcali ezingama-60.
Iqela lethu eliPhezulu labaPhicothi zangaPhakathi lenkqubo yolawulo lomgangatho we-ISO
Intlanganiso yethu yesiqhelo yokuphunyezwa kwe-6S
Uhlobo lomhlaba luxhaswa yinkcubeko. Siyiqonda ngokupheleleyo inkcubeko yakhe yokudibanisa inokwenziwa kuphela ngeempembelelo, ukungena kunye nokudityaniswa. Ukuphuhliswa kweqela lethu kuye kwaxhaswa ngamaxabiso asisiseko kule minyaka idlulileyo ------- Ukunyaniseka, ubuGcisa, uxanduva, ukusebenzisana.
Iqela lethu lihlala lihambelana nomgaqo, ojolise ebantwini, kulawulo lwengqibelelo, umgangatho konke, igama premium Ukunyaniseka iye owona mthombo wokhuphiswano lweqela lethu.
Ukutsha kukhokelela kuphuhliso, okukhokelela ekonyukeni kwamandla, Zonke zivela kwizinto ezintsha.
Amandla oxanduva olunjalo awanakubonwa, kodwa anokuvakala.
Sizabalazela ukwakha iqela elisebenzisanayo.
Sebenzani kunye ukudala imeko yokuphumelela ithathwa njengeyona njongo ibaluleke kakhulu kuphuhliso lweshishini.
Ngokwenza intsebenziswano efanelekileyo.
Iqela lethu likwazile ukufezekisa ukudityaniswa kwezixhobo, ukuhambelana ngokudibeneyo, vumela abantu abaqeqeshiweyo banike umdlalo opheleleyo kubungcali babo
Sisebenza kunye njengokuba sithatha inxaxheba kwimpi,
bonke abasebenzi babonisa imilo yabo yokulwa, eqinileyo nengalawulekiyo.